Kungani Ithimba Lommeli Lidinga Ukwenza Izilingo Zokuhlekisa Njalo?
Mashi 12, 2019
Ezimweni zemfundo, izilingo ezihlekisayo zenzelwe ukufundisa abafundi bezomthetho ukuthi bajwayelane nokuhlangenwe nakho kwasenkantolo. Yonke imininingwane nezinto ezibanjiwe kufanele zifakwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi zibonakala zingokoqobo. Ngokulingwa okuhlekisayo, abameli abangochwepheshe babengaqonda ngamandla nobuthakathaka bamacala abo. Ukonga isikhathi, isilingo sokuhlekisa singabuye sihlehliselwe ezingxenyeni ezingenalutho. Ngesikhathi sokuqulwa kwecala, uhlangothi ngalunye lunganikezwa ithuba lokwethula izimpikiswano zabo zokuvula nokuvala ngezinkomba zokufakaza kobufakazi nobufakazi. Uhlangothi oluphikisayo luyingxenye yethimba labameli futhi linikezwe umsebenzi wokunikeza ummeli impi enzima enkantolo ehlekisayo. Akunandaba ukuthi leli cala liyinkimbinkimbi kangakanani, noma imuphi ummeli ochwepheshe angathola isithombe esicacile ngalesi simo. Bangathola impendulo ebalulekile ohlangothini oluphikisayo.
Ithimba labameli kufanele lihlelele ukuqulwa kwecala kusenesikhathi, ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kosuku lokuqulwa kwecala langempela. Kulesi sigaba, kufanele kube nobufakazi obanele nobufakazi bokufakaza. Ngesikhathi sokuqulwa kwecala mbumbulu, abameli kufanele baqaphele uma imiphumela ibonakala inamandla ngokwabo. Kumele baqiniseke ukuthi bakwenze kahle konke. Uma bemele ummangalelwa, ubungozi bukhulu impela, ngoba ukwehlulwa kwecala kungaba nemiphumela ebalulekile kwezezimali. Isivivinyo mbumbulu singase futhi sinqume ukuthi kungenzeka yini ukuthi uhlangothi olunye luvumelane ngokukhokhwa okulungile ukugwema ukumangalelwa okubizayo futhi okuthatha isikhathi eside. Isivivinyo sokuhlekisa singaphezu komhlangano ojwayelekile futhi ukulingiswa kokuthi icala lesigcawu senkantolo lizoqhubeka kanjani. Uma ithimba labameli lenza iseshini yokuqala yecala labo lokuhlekisa, akucaci ukuthi lizofana ncamashi nento yangempela. Kodwa-ke, ngokuzijwayeza okuphindaphindwayo, iqembu lingagcina lize nezilingo ezihlekisayo ezingokoqobo.
Uma ukukwenza kahle, ukuqulwa kwecala mbumbulu kungavumela isikhathi nomzamo osetshenzisiwe. Kwezinye izimo, ummangalelwa angenza umsebenzi omubi wokwethula icala elihle kommangali, kuyilapho ummangali engenza umsebenzi omubi wokwethula icala eliqine kakhulu lommangalelwa. Kusho ukuthi kuzoba nenkinga yokuthi ungasenza kanjani ngokunembile isikhathi sokulingwa mbumbulu. Noma abameli bengeke bakwazi ukulingisa ngokunembile ukuthi uhlangothi oluphikisayo luzokwenzani, bangathola izinzuzo zokubona izinto kolunye uhlangothi. Uma amalungu eqembu lommeli enekhono, angenza ngokuqonde ngqo. Uma ungummangalelwa, ungaba nommangali obuthakathaka kabi kommangali, kepha ukuqulwa kwecala mbumbulu kuyinto odinga ukuyenza ngokuqhubekayo. Ekugcineni, ungathola impendulo enhle evela kuwo wonke umuntu. Noma ungenalo uhlobo lokuxhumana neqembu eliphikisayo, kufanele ukwazi ukwenza kangcono.
Kwezinye izimo, izivivinyo ezihlekisayo zingaba yimpendulo yangempela emibuzweni yakho. Kuyoba yihlazo langempela uma ungayenzi yonke into ngendlela efanele. Ungalahlekelwa yithuba elihle. Kuzoba lula kuwe ukufakazela inkinga. Kufanele ukwazi ukuhlola okuhlangenwe nakho nesimo sengqondo seqembu eliphikisayo enkantolo yangempela, uma uke wahlangana nabo phambilini.
Ukulingwa Kokuhlekwa Njalo
Yenza Izilingo Zokuhlekisa Njalo
Ummeli Wengozi: Ungamkhetha Kanjani ummeli wakho we-DUI
Izinto Ezi-8 Ummeli Womndeni Wakho Ozokuphathela zona